Micah 1 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ilizwi likaYehova elafika kuMika waseMoreshete, ngemihla kaYotam, ka-Ahazi, kaHezekiya, ookumkaniookumkani bakwaYuda, awalibonayo ngokusingisele kwelakwaSamari neYerusalem.
4 Ziya kunyibilika iintabaiintaba phantsiphantsi kwakhe, zicandeke izihlamboizihlambo, njengomthwebeba phambi komlilo, njengamanzi ephalazwe exandekeni.
6 Ngoko ke ndolenza elakwaSamari libe yimfumba yamatye esisimi, libe ziindawo zokutyala imidiliya; ndiwaphose amatyeamatye alo emfuleni, ndizityhile iziseko zalo.
7 Iya kuqotywa yonke imifanekisoimifanekiso yalo eqingqiweyo, lutshiswe ngomlilo lonke utsheqo lwalo, ndizichithe zonke izithixo zalo; ngokuba lizibuthe ngotsheqo lwehenyukazi, ziya kubuya ke zibe lutsheqo lwehenyukazi.
11 Dlulani, bemi baseShafire, nihambe zeze ngokulihlazo; abemi baseTsanan abaphumanga: umbambazelo lwaseBhete-etsele lunihlutha ukuma kwenu kuyo.
12 Kuba abemi baseMaroti bazibhijabhija ngenxa yokulungileyo; kuba kuhle ububiububi buphuma kuYehova, beza esangweni leYerusalem.
13 Bophani iimbaleki ezinqwelweni zokulwa, bemi baseLakishe; ibikukuqala kwesono entombini enguZiyon, ukuthi zifunyanwe kuyo izikreqoizikreqo zakwaSirayeli.
14 Ngako oko uya kuyinika iMoreshete yaseGati inqakwe; izindluizindlu zaseAkezibhi ziya kuba ngumlambo okhohlisayo kookumkani bakwaSirayeli.
15 Ndisaya kuyizisa indlalifaindlalifa kuni, bemi baseMaresha; baya kufika eAdulam abazukileyo bakwaSirayeli. Chebani, niziguye iintloko, ngenxa yoonyana beziyolo zenu;